Top 8 Free Online Photo ka Katuunu Ngwaọrụ ka Cartoonize Your Photos
> Resource> Atụmatụ> Best 8 Online Photo ka Katuunu Ntụgharị ka Cartoonize Photos
Ì chere banyere eme a katuunu nke onwe gị, n'ihi na-anọchite anya onwe gị na ndị online profaịlụ? Na ochie ụbọchị, ndị mmadụ na-eji ise a katuunu. Ugbu a na technology mmepe, ọ bụ nnọọ mfe n'ihi na gị ike cartoons si foto gị. Ihe ị chọrọ ime bụ a foto na eserese na-atọ Ntụgharị. Dị nnọọ kwadebe gị dijitalụ photos, na-na foto na eserese na-atọ akakabarede ngwá ọrụ na-eme ka a katuunu na ọtụtụ clicks!
N'ezie, e nwere ọtụtụ free ngwaọrụ pụrụ inyere gị aka cartoonize foto gị. Ụfọdụ na-ebudatara software na ụfọdụ ndị online ngwaọrụ. Ebe a kacha mma 8 free online foto na eserese na-atọ saịtị na-depụtara. Ị nwere ike ịtụtụrụ otu bulite gị ihe oyiyi na ike a katuunu agwa maka gị maka free ma ọ bụ mee ka onye na avatar na gị creativity.
Free weebụsaịtị iji tọghata foto cartoons
Photo ka katuunu saịtị 1> Portrait Illustration Onye kere: Nke a free foto na eserese na-atọ ngwá ọrụ-enyere gị aka ka gị onwe gị katuunu kpam kpam. Ozugbo i kere gị katuunu agwa ma ọ bụ avatar, i nwere ike dị pịa akara ngosi na-amasị gị na-ahọrọ "Save Foto Dị ka ..." si menu ịzọpụta gị onwe gị katuunu.
Photo ka katuunu saịtị 2> BeFunky: BeFunky enye gị ohere ike cartoons si gị dijitalụ photos. Dị nnọọ oghe BeFunky na bulite foto gị na ya. BeFunky ga n'ịwa cartoons na-akpaghị aka n'ihi na ị. Ọ dịghị oru ihe ọmụma na-mkpa, ọ bụ nnọọ otú mfe! Na-ewu ewu foto formats dị ka JPEG, GIF na PNG na-akwado. Ọ bụrụ na ị photos-echekwara na online foto nkekọrịta saịtị, ị nwekwara ike pịnye ke URL, na BeFunky ga-photos dị ka URL ị na-enye.
Photo ka katuunu saịtị 3> Kuso Katuunu: Kuso Katuunu bụ a free online foto na eserese na-atọ Ntụgharị n'ihi na ị na-adị mfe na ngwa ngwa tọghata gị foto cartoons. Nza nke ekwekọghị na na agba na-nyere gị nhọrọ.
Photo ka katuunu saịtị 4> Yahoo! wepụtara: Ọ na-ewere dị ka ndị kasị ewu ewu ọrụ ike online wepụtara. Na ya, ị nwere ike mfe na-enweta ihe eserese na ọkacha mmasị gị okwu na uwe.
Photo ka katuunu saịtị 5> South Parker Studio: South Parker Studio nyere a nnukwu iche iche nke odide, sitere na site ndị okenye na-kindergarteners. I nwekwara ike kpamkpam họrọ ekwekọghị, anụ ahụ, uwe, wdg maka odide. Mgbe ị na-okokụre na-eme ka avatar, i nwere ike ịkọrọ ya na Facebook.
Photo ka katuunu saịtị 6> adịgboroja Your manga: Ị nwere ike iru gị creativity ebe a, ebe i nwere ike amalite site ọkọ na-eme ka a katuunu. The ihu, anya, noses, ọnụ, ntị, uwe, wdg nwere ike nile kpam kpam họọrọ. Ị nwere ike ibudata avatar gị obodo disk na-eji ya na gị na ndụ ozi, skype, facebook wdg
Photo ka katuunu saịtị 7> Zwinky: Zwinky nwere ike na-arụ ọrụ site na Internet Explorer toolbar na-arụ ọrụ nke ọma na foto nke a na-acha ọcha ndabere. Ọ na-enye nza nke uwe na ngwa na-eme omenala odide. Dị na-eji gị creativity na-eme ka a oké avatar.
Photo ka katuunu saịtị 8> Meez: Meez bụ ihe online-elekọta mmadụ obodo na a mebere ụwa, wepụtara na egwuregwu jikọtara. On Meez, ị nwere ike kpamkpam hazie njirimara gị na cartoons. Ọ bụkwa ebe dị mma jikọọ na ndị enyi na òkè mgbasa ozi faịlụ.
Site n'ụzọ, ọ bụrụ na i nwere ọtụtụ photos na aka, ị nwekwara ike ime ka a foto nkiri show na ụfọdụ nkiri Ndinam software iji chebe na ịkọrọ gị foto ebe nchekwa na a ụzọ ka mma.